Tinklaraštis Aha Echiche: At :matụ Iji Họrọ Auru N'ihi Na gị dienoraštis
Ọkpọ dienoraštis dar ikebụ ihe siri ezigbo ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ maka ịde blọgụ na ịkọ ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, we re re ike ike i ji ụ ụ ụ ụ ụ ụ na na na na na na na ma, naan ma iji, mejupụta, ndepụta, nke, crappy.
Ọfọn, obi dị m ụtọ na ị jụrụ! Ọ bụrụ na ị bụ ụdị kpọrọ asị na-eme aha ma ọ bụ na ọ bụ ihe dị egwu na ya, abịawo m ụfọdụ atụmatụ na usoro iji nyere gị aka ịmepụta ma wepụta aha zuru oke maka blog.
1 ND # MỌD # 1: Gh Blogta otu aha gị si na-anchchite ika ghe na Blog
2 „Ntuziaka“ Nr. 2: „Naujasis tezauras nėra žinomas kaip gerai!
3 Ntuziaka # 3: Jiri daiktavardžiai, veiksmažodžiai, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
3.1 „Ntụle ọkwa nke ọkwa“: Iji Okwu emepụtara ma ọ bụ Ịchọta Okwu nke Gị
4 „Ntuziaka“ Nr. 4: Negalima naudoti jokių pakeitimų, „Jiri Blog Aha“ / „Okwu Generator“
5 Achọta Aha Aha Zuru Okè
ND # MỌD # 1: Gh Blogta otu aha gị si na-anchchite ika ghe na Blog
Tupu anyị arịgoo iwepụ aha ndị na-ede aha nchịkọta, ọ dị mkpa iwepụ oge ma ghta ihe blog ‘ai aha aha gị na-anọchite anya ya.
Klauskite savo internetinio dienoraščio?
Kedu ka aha aha dienoraštis ga – esi nyere gị dar žinomas kaip ịmepụta ika gị?
Aha dienoraštis gw kwesịrị ịkọ na ụdị ọdịnaya ị na-eme. Ar tu buvai internetiniame dienoraštyje, jis nebuvo žinomas "Maisto gaminimo kampelis" ma ọdịnaya gị bụ maka ịtụle ihe gbasara ntutu isi maka ụmụ nwoke, ị ga – eme ka ndị na – agụgụ ihe na –
Ọ bọrụ na ị chọrọ malite blog blogi, ị ga-eji okwu ndị metụtara nri ma ọ bụ iri nri (ya bụ, užkandžiavimas, veganas, sveikas, chomping, wdg).
O Būrų na dienoraštis GI banyere usoro azụmahịa, aš n-eji isiokwu NDI metụtara ULO Oru NDI AHU MA O bu Jiri okwu nkwekọrịta (Dika SEO, ahịa dijitalụ, SEM wdg).
„Ntuziaka“ Nr. 2: „Naujasis tezauras nėra žinomas kaip gerai!
N’oge a, ị ga-enwe echiche nke okwu ndị kachasị mma ịkọwapụtara na blog gị. Ugbu na-abịa ebe egwuregwu ahụ! Buru aisauras, obu buru ibu thesaurus.com, na lelee okwu ndị yiri ya nke awere ike iji maka aha blog.
Ka anyị kwuo na e na-eme blọọgụ nri. We we ike ik ikpebi na ọtụtụ ọdịnaya gị ga-abụ isiokwu ndị na-esonụ: Nri, nri siri ike, veganai, mmega ahụ, obi ụtọ, ntụziaka, na ihe oriri.
Tinye okwu ndị ahụ n’ime thesaurus.com na na ga-enweta okwu ndị dị ka nri, nri, ọhụụ, mma, ọṅụ, goodies, nri, munchies, ike, obi, veggies, na obi ụtọ. Tinye ụfọdụ okwu ndị ahụ ọnụ (d ka ka vegan munchies or Kwado nri nri) na voila, we dar tu esi blogas dienoraštis gị.
Mgbe ị nọgidesiri ike na-eche echiche maka okwu iji aha gị blog “, we ike ike ji sa sa sa sa sa urus urus mee mee mee mee mee mee mee ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma.
Ntuziaka # 3: Jiri daiktavardžiai, veiksmažodžiai, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
We we re ik ikpebi na iji tesaurus ahụ zuru ezu, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu gị na ọkwa ọzọ, malite na-agbakwụnye mkpụrụ okwu, okwu veiksmažodžiai na / ma ọ bụ nkọwa.
Naktiniai žodžiai, veiksmažodžiai, na okwu ịkọwapụ nwere ike ịmezie ahazi aha gị, na-eme ka ọ bụrụ nke gị. Ọzọ, ọ na-enyere dar žinomas kaip izere iji ihe ntanetụ na saịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ yiri nke gị.
Svetainė yra „nch itinkọta ihe oriri“, „were ike stereye okwu okwu ma ọ bụ nkọwa ndị na-adabere na gda dkaka blogger, nke nwere ike ịbụ: onyeisi, nwa okorobịa, nwa agbọghọ, onye mbido, nrid, nri, nri, nri, nri, nri , nri ehihie, ụlọ ọrụ, wdg
Debe ha ọnụ na ị ga-enweta ihe bara nnukwu uru dị ka nri ụmụaka kwesịrị ekwesị, veganų bosas munchies, ntụ ọka kichin ọhụrụ, ma ọ bụ ụlọ oriri na-edozi ahụ.
Aš nwedịrị ike ime ya ka ọ gbakwunye ma gbakwunye ihe ngwa ngwa ma ọ bụ okwu dịgasị iche iche ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ụfọdụ ihe atụ ga-abụ: ntụziaka nwa agbọghọ kwesịrị ekwesị, na-eri nri nri n’oge nri, ndị na-aṅụrị ọṅụ, dị mma ma dị ọhụrụ.
„Ntụle ọkwa nke ọkwa“: Iji Okwu emepụtara ma ọ bụ Ịchọta Okwu nke Gị
Maka ndị nwre mmasị, we ike wa nwle ị mepụta ma ọ bụ mepụta okwu ọhụrụ ọ bụla ị ga-akpọ aha gị na dienoraštis gị.
Nke na-achọ ntakịrị ihe na-eche echiche na-abụghị nke na-eche echiche ma ọ bụrụ na ime-elu nwere ike ịghọ ụzọ dị egwu iji gbakwunye egwu na aha aha gị. Ufodu, jei jūs negaunate snackzilla, odi ozo, sizzlerella, ahuike.
Atụla egwu ịnwale ụdị okwu ọbụla ma nwee obi ụtọ na ya. We Nauji ike imeri aha dị mma nke ọ na-adịghị onye ọ bụla chere!
„Ntuziaka“ Nr. 4: Negalima naudoti jokių pakeitimų, „Jiri Blog Aha“ / „Okwu Generator“
saịtị dị ka Wordroid.com ụ ngwá ọrụ dị ukwuu iji na-ejikọ ọnụ na okwu ọchị ma ọ dị mfe ime. Naanị tinye okwu nke metụtara ọdịnaya gị, pịa bọtịnụ "wordoids", ọ ga-enye gị ndepụta aha ndị ị dar nebuvo ike iji.
Aš nenoriu, kad „Wordroids“ būtų visiškai panašus į „ókèịị ok ok ok ok ok ok ok ok ok okọọọọọọọọọọọọọọọọịịịịịịịịịịịịịịịaaaaa,,,,,,,, na na na na na na na na na na na na na na na na naè na naụ na na nagagagagagagaga nagaga na nahahahahahahahahahahahahahahahaha na na na na na na na na na na na na n Word neist jų taip padidinti. Nke a pụtara na we dar nebuvo ike ịchọpụta ma aha ịchọrị ịdenyere aha na .com ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ewepụta nchekasị nke ịmepụta ihe dị egwu ma chọpụta na e buvai.
Achọta Aha Aha Zuru Okè
Niekada nerašykime į tinklalapį, nes mes neturime tinklaraščio, o „bpeaụịịịị – – – – – ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek.
Ka o sina dị, ịmepụta aha agaghị abụ usoro ihe omimi. Na, obi ụtọ ma soro ya mee ihe nadị gịrụ gị ga-ahụ nke ahụ.
Cheta, enweghi iwu ndi siri ike mgbe abia ime aha. Ọ bụrụhaala na ị hụ na ọ na-ejikọta ọdịnaya gị, we re re re ike ụ ụ ụ ụ ụ ụ ok ok ok ok ok ị ị ị ị ọ ọịọị!
Ozugbo ị nwetara nke ahụ n’ụzọ debanye aha gị blog’as ngalaba, k na-elekwasị anya n’ihe ndị ka mkpa dị ka ede ederede epinis na eto eto gi.